Kuyini i-spc floor? - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Kuyini i-spc floor?
Hlela: UDenny　2019-12-17　Iselula
Iphansi le-SPC lakhiwa kakhulu i-calcium powder ne-polyvinyl chloride stabilizer engxenyeni ethile yokwenza izinto ezihlanganayo zephansi. Iphansi le-SPC lisebenzisa i-calcium powder njengezinto eziyisihluthulelo esiyinhloko. Ngemuva kokufaka ipulasitiki nokusabalalisa isendlalelo, ungqimba olunethiwekhi yokuhlobisa ifilimu eshisa izikhawu ezine kanye nokugobeka okungahambisani nakho akunazinto ezinobungozi njenge-formaldehyde nezinsimbi ezisindayo. Kuyindawo evikela imvelo evikelekile engu-100%. 0 floordehyde flooring.
1. Ubukhulu obujwayelekile bungamamitha ayi-4-5,5 nje kuphela. Umklamo we-Ultra -onda ungukuqanjwa ngesibindi embonini yobungcweti. Ingaphezulu liphrintiwe ngezinto ezibonakalayo futhi i-substrate ihlanganiswe ne-100% ungqobelo lokuvikela ubumsulwa obuphakeme. Ukuthungwa kwemabula, ngenxa yezimpawu zezinto zokusetshenziswa okungavuthiwe, ukwenziwa kokushisa okushisa okusheshayo nesikhathi eside sokugcina ukushisa, yisitezi sokuqala sokushisa phansi.
I-2, engenabo ubuthi futhi ayinamatheli, ayesabi amanzi, umlilo, noma umswakama; ngokuya kokumelana kokuqala, ukusetshenziswa kwezinsiza kusebenza, kanye nokusebenza kwe-anti-skid, ukufakwa kwesikhiye kwe-SPC kungcono kunokuphonsa phansi kwe-laminate.
3. Ngeke kube khona izimbobo ezingaphezulu kwephahla le-SPC yokukhiya futhi akukho ukuvuza kwamanzi; ngeke kube khona ukubanjwa kwendle ngemuva kokusipenda. Ngemuva kokufaka amabala, kusule ngobunono ngensimbi, futhi kungahlanzwa kalula ngaphandle kokushiya umaki okunzima ukuyisusa. Dinga imikhiqizo yokunakekelwa okukhethekile ukuze uyilondoloze.
4. Isitezi se-SPC sithathwa njengesizukulwane esisha sezinto zokubeka phansi, ezibonakala ngokuthi: sizinzile ngokuphelele, ukusebenza okuphezulu, ukungavunyelwa ngokuphelele kwamanzi, isisekelo sokuthengisa okuphezulu, kanye nokumelana ne-induction, kungafakwa kalula ezinhlotsheni ezahlukahlukene zezisekelo zekhonkrithi, I-Ceramic noma phansi ekhona.
Indawo esetshenziselwa ukuvala indawo yaphansi ye-SPC: Ngenxa yobukhulu bayo obukhulu, imibala eminingi, isitayela esigcwele, ukusebenza kokuvikelwa kwemvelo okwenziwa yikhabhoni kungasetshenziswa kabanzi ezinkulisa, ezibhedlela, emahhovisi, ezakhiweni zamahhovisi, ezinxanxatheleni zezitolo, emakhaya, KTV nakwezinye izindawo zomphakathi.
Kuyini i-spc floor? Okuqukethwe okuhlobene
Ngenxa yezimpawu ezibonakalayo zokwanda okushisayo nokwenziwa kongqimba kwehhovisi le-PVC, amakhasimende amaningi abika ukuthi phansi ngokuvamile kuvame ukungalingani lapho kubhangqiwe ebusika. Eqini...